Ny Brit izay nanampy tamin'ny fananganana seranam-piaramanidina Iraisampirenena Seychelles dia niverina 48 taona taty aoriana | Vaovao momba ny fiaramanidina
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Other • Vaovao momba ny dia any Seychelles • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao any UK
Ny Brit izay nanampy tamin'ny fananganana seranam-piaramanidina Iraisampirenena Seychelles dia niverina 48 taona taty aoriana
Brit Norman Rose izay nanampy tamin'ny fananganana Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Seychelles
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Brit izay nanampy tamin'ny fananganana seranam-piaramanidina Iraisampirenena Seychelles dia niverina 48 taona taty aoriana
Teratany anglisy iray izay nanara-maso ny fahavitan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Seychelles tamin'ny taona 1971 dia nahatsapa ny nofinofiny hamangy indray ireo nosy afaka 48 taona.
Norman Rose, 91, dia nandany telo andro tany Mahe niaraka tamin'ny zanany vavy Jennie Powling tamin'ny fitsidihana noeritreretiny nandritra ny taona maro.
Rose izay nijanona tao amin'ny Avani Resort and Spa tao Barbarons dia tonga tao amin'ny biraon'ny SNA any Victoria ny sabotsy mba hizara ny fomba nahatonga azy ho isan'ny tantaran'ny nosy.
“Tamin'ny volana Jona 1970, tany Londres, dia niara-niasa tamin'ny injeniera niaraka tamin'ny Ministeran'ny asa fanorenana aho. Fotoana roa no tonga - ny iray dia ny fanamboaran-dàlana iray any Nepal ary ny iray hafa hanara-maso ny fahavitan'ny làlambe misy ny seranam-piaramanidina any Seychelles, ”hoy i Rose nanazava.
Noho ny antony sasany dia nofoanana ny tolotra Nepal. Tamin'ny volana septambra tamin'io taona io dia nandeha nankany amin'ny nosy 115 nosy any amin'ny faritra andrefan'ny Ranomasimbe Indiana i Rose - toerana iray zara raha fantany.
“Ny diako dia natomboka tamin'ny dia lamasinina nankany amin'ny seranam-piara-manidina tao Heathrow izay nandehanako nanidina nankany Charles de Gaulle any Paris. Avy any dia sidina tontolo alina nankany Nairobi. Tany Nairobi, sidina roa samy hafa nankany Mombasa ary avy eo nankany Maurice. Avy tao ny sidina farany nankany Mahe, izay nijanonanay tamin'ny vonjimaika vita amin'ny tany ho an'ny fiaramanidina kely, ”hoy i Rose nanazava.
Indray mandeha tao amin'ilay nosy taorian'ny dia nandritra ny efatra andro dia nandehandeha tao amin'ny Hotel Northholme avaratry ny nosy lehibe Mahe.
“Izaho dia tao anatin'ny ekipa nanara-maso ny seranam-piaramanidina vaovao tao Mahe, izay rehefa vita dia handray ireo mpitsidika erak'izao tontolo izao. Tonga tamin'ny volana septambra aho ary feno 50 isanjato ny seranam-piaramanidina. Ny tampon-tendrombohitra dia tsy maintsy nesorina ho fiarovana ny zotram-piaramanidina ", hoy ny teratany anglisy.
Raha ny filazan'i Rose, Costain, ireo mpifanaraka anglisy dia nahavita ny 9,000-ft. base base runway lava.
“Hofeninay izao ny lalan-kely mihazakazaka 50 isan-jato, izay tokony 14 sm ny hateviny. Izaho no tompon'andraikitra voalohany tamin'ny fanaraha-maso kalitao ny fitaovana sy ny mpiasa, "hoy ny misotro ronono.
Naharitra enim-bolana ny asa nanirahana an'i Rose tany Seychelles ary ny fahatsiarovana azy tsara indrindra momba ireo nosy dia ny fijoroana vavolombelona tamin'ny tantara tamin'ny fahatongavan'ny sidina iraisam-pirenena voalohany.
“Tamin'ny volana martsa 1971 dia nahita ny RAF Gan Hercules nanandrana voalohany ny lalan-kely izahay. Ary tamin'ny fahatongavany dia nanome anay ny hazavana maintso fa vita ny asanay ary efa vonona ny lalambe », hoy i Rose iray niavonavona, izay nanome baiko an'ireo Seychellois izay anisan'ny ekipa tamin'ny asa mafy nataon'izy ireo.
Fotoana fohy taorian'ny niverenan'i Rose tany an-trano. "Rehefa niditra tao an-trano ho any Kampalour aho dia nahatsikaritra zazavavy efatra teo an-toerana ho any Londres vonona ny hampiofana azy ireo amin'ny maha-mpampiantrano an'habakabaka ho avy azy," hoy i Rose, nampiditra ny fomba nandraisana azy tsara tany amin'ny hotely Northolme nataon'ny Ramatoa Broomhead sy izy tehina.
“Niasa mafy ho an'i Costain ny mponina ary nandray anay tsara. Nandritra ny fotoana nijanonako dia nampiasa ilay mpanety aho, nanatrika ny fotoam-pivavahana Krismasy tany am-piangonana, nijery ny fifaninanana Miss World teo an-toerana ary nitsidika ilay vala sokatra goavambe, ”hoy i Rose nahatsiaro.
Fa ny zavatra tena niriny indrindra dia ny hiverina hahita ny fiovana lehibe ary hizara ny fiainana nosy niaraka tamin'ny zanany vavy tokana.
“Te hiverina i Dada mandritra ny taona maro, toy ny te hiverina aho hijery ny fiovana ary tiako ho hitanareo ny toerana niasako. Nahemotra foana anefa izany, ary tamin'ity taona ity dia hoy i Dada tamin'i Chris zanako lahy: 'Andao hamandrema ny zava-drehetra dia andao hanao izany!' ”Hoy ny fanazavan'i Powling, izay nanampy fa ny British Airways izay miasa mivantana ny nosy dia nanamora ny fanapaha-kevitra.
Nilaza i Powling fa ny rainy dia mbola miaina fiainana mavitrika ary milalao golf indroa isan-kerinandro. Nanampy izy fa ny ray aman-dreniny dia mbola manambady am-pifaliana aorian'ny 70 taona.
Notsiahivin'i Rose ny fijanonany tao Seychelles tao amin'ny boky nosoratany tamin'ny 2016 teo amin'ny faha-88 taonany. Ilay boky - Tadidin'i Twin Bases - dia manamarina ny fiainany hatramin'ny fahazazany ary amidy any Amazon.
Ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Seychelles dia nosokafan'ny Herin'ny Mpanjakavavy Elizabeth II tamin'ny 20 martsa 1972.